कार, साथै वस्तुतः कुनै पनि सतह परिवहन गरेर, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका टायर खेल्छन्। यो कागज मा, चर्चा VAZ 2114. लागि टायर मा गएर जस्तै प्रश्न हिम्मत हुनेछ: 2114 मा टायर आकार, को गर्मी र जाडो मौसम लागि टायर को सही विकल्प, साथै भण्डारण र सञ्चालन अवस्था।
टायर को सही विकल्प - समय धेरै रकम आवश्यक गम्भीर व्यापार ड्राइभर र भुक्तानी गर्न आफ्नो क्षमता मा निर्भर गर्दछ। उपयुक्त डिजाइन गर्न उत्प्रेरित गर्न देहात देखि - आवश्यकता खातामा लिन किनकी लगभग सबै रबर सरल कार्य को विकल्प छैन भन्न सकिन्छ। निम्न रबर को प्रकार वर्णन र 2114 मा एक टायर आकार स्थापित गर्नुपर्छ।
सबै मौसम लागि प्रयोग टायर लागि जाँदा, त्यसपछि 2114 को लागि यो आवश्यक छैन तिनीहरूलाई categorically लिन छ। को गर्मी लगभग अनुपस्थित छ मा रबर जस्तै ठूलो र राम्रो पकड, को हिउँदमा लगाउने। सस्तो रबर को धेरै प्रकार को राम्रो टायर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु छन्, तर तिनीहरू विश्वसनीय हुनुपर्छ। पहिले नै हो जो महिना को एक जोडी मात्र landfill गर्न उपयुक्त हो सबै-सिजन टायर, बारे 2000 rubles खर्च गर्न भन्दा टायर, हरेक सिजन परिवर्तन गर्न सस्ता। यस्तो टायर को लागत आफ्नो गुणस्तर बराबर छ।
एक वाहन 2114 को लागि टायर आकार
चयन गर्न 2114 मा के आकार टायर निर्णय मात्र कार मालिक सिधै निर्भर गर्दछ। जवान पुस्ता देख, यो रबर प्रोफाइल कार बाटोमा व्यवहार तल्लो, राम्रो छ भनेर देखिन्छ। यो, रूस को सडक मा एक दुःखी अन्त गर्न नेतृत्व गर्नेछन् जो सरासर भ्रम, किनभने नतिजा - डिस्क को हानि।
टायर 2114 मानक जारी आकार R13 वा R14। टायर बारेमा जानकारी वाहन लागि दस्तावेज पाउन सकिन्छ। कार मा पाङ्ग्राहरू र टायर स्थापना - एक गुणस्तर सवारी र सुन्दर डिजाइन - मालिक को निर्णय, यो सबै आफ्नो उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। तपाईं 2114 मा टायर चयन भने, R13 आकार सुंदरता मा कार अनुरूप सबै भन्दा राम्रो र आन्दोलन रूपमा।
जाडो टायर छनौट
को हिउँदमा ड्राइभिङ यो टायर प्रयोग गर्न R14 सर्वश्रेष्ठ छ। को 2114 R14 आकार रूसी सडक मा आन्दोलन को लागि सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त मा जाडो टायर, टायर एक हिउँ छोपेको सडक र लागि चिसो लागि आदर्श छ जो, 175/65 मिलिमिटरमा को आकार छ।
को धक्का टायर हाम फाल्न छैन मा, उपयोगी गहिराई मा prodavlivayas, जब हिउँ ड्राइभिङ कारण यसको चौडाइ गर्न "डुबा" गर्न अनुमति छैन! 2114 मा जाडो टायर आकार, हरेक क्षण, इच्छित सेवा जीवन प्रयोग फ्रिक्वेन्सी सोच चयन गर्न छ।
2114 को रूप मा, र वाहन को अन्य प्रकार मा टायर धेरै तत्त्वहरू हुन्छन्:
फ्रेम - मुख्य तत्व टायर, wherein त्यहाँ रबर ढाकिएको कर्ड धेरै तहहरू छन्।
Brecker - को tread र लास बीच स्थित छ कि टायर को भित्री भाग। यसको निमित्त उद्देश्य - easing तनाव रक्स वा धक्का मार गर्दा निरन्तर।
Tread - बाहिरी र विशिष्ट ढाँचा भइरहेको एक रबर टायर भाग।
Sidewall - क्षतिग्रस्त हुनबाट फ्रेम रोक्छ जो टायर, छेउमा रबर पत्र।
बोर्ड - कठोर सदस्य, रिम मा टायर माउन्ट गर्नका लागि प्रयोग भइरहेको।
बस जसमा एक बेल्ट एक 45 डिग्री कोण, रेडियल भनिन्छ छ। यी टायर भारी लोड र लामो सेवा जीवन सामना गर्न एक सुविधा छ।
टायर को भण्डारण अवस्था
टायर, साथै अन्य mnogoznachimye वस्तुहरू भण्डारण र प्रयोग को एक विशेष विधि आवश्यक छ। कार टायर, आफ्नो सिजन को प्रस्थान, एउटै तापमान मा र भित्र वायुमंडल को एक निश्चित रकम भण्डारण गरिएका गर्नुपर्छ।
निक्षेप को टायर हटाउने अघि त्यो कहाँ उभिए, प्रत्येक टायर थाहा दिनेछु जो एक चिन्ह, बनाउन आवश्यक छ। अर्को डिस्क को rotting जोगिन गर्न प्रत्येक पाङ्ग्रा धुन गर्नुपर्छ। यो टायर संरक्षण लागि प्रयोग विशेष रसायन प्रशोधन गर्न मनमोहक छ whereupon पत्थर, को tread हटाउन आवश्यक पनि छ।
प्रशोधन समयमा, तपाईंले रबर र विलायक को रंग पुनर्स्थापना धन प्रयोग गर्न सक्दैन, तिनीहरूले मात्र संरक्षण चोट। यो प्रक्रिया द्वारा टायर को पहिले उमेर बढन जोगिन गर्न ध्यान उपचार गर्नुपर्छ। प्लास्टिक बैग को प्रयोग - सबैको व्यापार, मुख्य कुरा - प्याकेज प्रयोग गर्न कस बाँध गर्न, condensate जम्मा गर्दैन।
टायर रबर डिस्क ठाडो राखिएको हुनुपर्छ बिना, एक निलम्बित अवस्थामा वा प्रत्येक अन्य मा डिस्क भण्डारण गर्नुपर्छ। ठीकसित र यदि टायर तपाईं लामो समय टिक्न र आफ्नो बजेट बचत हुनेछ।
वाहन टाटा एच 100: अवलोकन, विशेषताहरु र मूल्यांकन
हामी तपाईंको आफ्नै हातले विवाह निमन्त्रणा बनाउन
एक बच्चाको लागि Kenguryatnik - यो सुविधाजनक छ र यो आवश्यक छ!
हात्ती अफ्रिकी र भारतीय हात्ती: मुख्य मतभेद र समानता
बेचन खर्च - यो के हो? त्यो व्यापार खर्च समावेश?
ब्राउन गर्न कालो भेष रूपमा? चार सरल विधि